छुट्टिए ट्रम्प–किम : अब छिट्टै अमेरिकाको ह्वाइट हाउसमा भेट होला ?
काठमाडौं, २९ जेठ – १२ जुनको वार्ताको परिणाम के आउला भन्ने विश्वको व्यग्र प्रतिक्षाको घडी अन्ततः आज बिहान सुखद अन्त्यमा टुंगिएको छ । कोरियाली प्रायद्वीप र लगभग विश्व नै आजको बैठकले कुन रुप लेला भन्ने प्रतिक्षामा बसेको थियो । तर, आज बिहानको पहिलो बैठकमै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ् उन आणविक निशस्त्रीकरणमा सहमत भएपछि त्यो प्रतिक्षाको अन्त्य सुखद हुन पुगेको हो ।
अमेरिका र लगभग विश्वले नै कडा मिजासका दुवै नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम पहिलो वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? त्यसैमा वार्ताको भविष्य निर्भर रहन्छ भन्दै परिणामको पर्खाइमा थिए । जब दुवै नेताले पृष्ठभूमिमा राखिएका दुवै देशका झण्डाको अघि उभिएर हात मिलाए र मुस्कुराए । तब दुवैको ‘बोडी ल्याङ्ग्वेज’ (शारीरिक भाषा) ले केही बोलिसकेको थियो । केही क्षणको एक्लाएक्लै वार्तापछि समाचार पनि सकारात्मक नै बाहिर आयो । अमेरिकाले भन्ने गरेको निशस्त्रीकरणको मागमा उत्तर कोरिया सहमत भयो र अमेरिकाले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लियो ।
यससम्बन्धी महत्वपूर्ण दस्तावेजमा दुवै नेताले हस्ताक्षर गरे । ४ बुँदै सो दस्तावेज वास्तवमै ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । उक्त दस्तावेजमा उत्तर कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापनाको कुरामा प्रतिवद्धता जनाउनु महत्वपूर्ण हो । अभूतपूर्व वार्ता गरेपछि उक्त संयुक्त सहमतिपत्रमा दुवैले हस्ताक्षर गरे । त्यस क्षणलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले नै एक अभूतपूर्व क्षण भनेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले केहीबेरअघि भएको वार्ताबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको र यसबाट आफूले निकै गर्वको अनुभूति गरेको बताए ।
एक्लाएक्लै वार्तामा नै नेता किमले अब २ देशबीचमा नयाँ सम्बन्धको अध्यायको सुरुआत भएको र विगतका कुरा बिर्सिएको भनी दिएको तर्कबाट नै राष्ट्रपति ट्रम्प प्रभावित भएका थिए । त्यसलगत्तै संवाददातालाई राष्ट्रपति ट्रम्पले अब अमेरिका र कोरियाली प्रायद्वीपबीचको सम्बन्ध पनि भिन्न रुपमा अघि बढ्ने बताए । अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो अभिव्यक्तिलाई कोरियाली सञ्चारले भने बडो महत्वका साथ प्रचार गरेका छन् । उनीहरूले अमेरिकाले उत्तर कोरियाली नेताको प्रस्ताव स्वीकार गरेको भन्ने अर्थमा प्रचारमा ल्याएका थिए । दुवै पक्षले इतिहासमै विशेष सम्बन्धको विकास गरेको भनेर खुसी पनि व्यक्त गरेका छन् ।
यति मात्र होइन कि उत्तरका नेता किमले बैठक ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएकोले आगामी केही समयमै विश्वले नै ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन देख्नसक्ने धारणा राखे । उता, अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि आफूहरू अब छिट्टै ह्वाइट हाउसमा भेट्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘वार्तामा आफूले नसोचेको प्रगति भयो,’ उनले भने ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तर कोरियाले पूर्णरुपमा प्रमाणिकरण गर्न सकिने खालको परमाणु निशस्त्रीकरणमा जोड दिएको थियो । उता, उत्तर कोरियाले पनि ठूलो खतरा मोल्दै यस अगावै आफ्ना परमाणु परीक्षणस्थल भत्काएको थियो । उत्तरले वार्ताको वातावरण त उहिलेदेखि नै निर्माण गर्दै आएको थियो । तर, पनि यी २ नेताको स्वभाव र प्रकृतिका कारण वार्ताको टेबलमै बसेपछि मात्र विश्वास लाग्ने भनाइ विदेशी समुदायको थियो ।
वार्ताका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफैंले खतरा मोलेको भनाइ छ अधिकांशको । उनले नै सत्तामा आएपछि पहिलेको तुलनामा झन् कडारुपमा नाकाबन्दी लगाएका थिए । त्यति मात्र नभएर उनले उत्तरका विरुद्धमा सैन्य कारबाही गर्न समेत एसियाका नेताहरूको सहमतिका लागि एसिया भ्रमणमा निस्किए । अमेरिकी अधिकारी पनि राष्ट्रपतिले अनावश्यक मानिससँग वार्ताको खतरा मोलेको बताएका थिए । तर, उनी कम्तीमा १ पटक वार्ताको टेबलमा बस्ने अडानमा रहे र आज त्यो सफल पनि भयो ।
अर्कातर्फ उत्तर कोरियाली नेता किमका लागि भने यो निकै ठूलो अवसर बन्न पुगेको छ । ६ महिना अघिसम्म एकअर्कालाई सिध्याइदिने भन्नेजस्तो अवस्था रहेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग एउटै दस्तावेजमा सही गर्न पाउने र एक्लाएक्लै वार्तामा बस्न पाउने पनि ठूलो अवसर भएको भनाइ छ । यसबाट आफ्नो देशमाथि लागेका सबै प्रकारका नाकाबन्दी हट्ने अपेक्षा उत्तरले गरेको छ ।
यस वार्ताको सफलताबाट विश्वले गरेको अपेक्षा हो शान्ति र एकता । त्यो शान्ति उत्तर कोरियाले पालना गर्ने निशस्त्रीकरणबाट सुरु हुन्छ, जुन प्रतिवद्धतामा उसले हस्ताक्षर गरेको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा आणविक परीक्षणमात्र रोकिँदा, अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच हतियारको होडका अभिव्यक्ति नआउँदा मात्र पनि विश्वमा शान्तिको स्थापना हुने अपेक्षा छ ।
त्यस्तै, विश्वले चाहेको एकता २ कोरियाबीचको एकता हो । सन् १९५३ मा अनायासै एउटै कोरियाका नागरिक विभाजन भएपछि आजका दिनसम्म जुन पीडा उनीहरुले भोगेका छन् । त्यसले समय समयमा विश्वकै नागरिकलाई पनि बडो स्तब्ध गराउने गर्छ । यी कोरियाको पारिवारिक पुनर्मिलनमा देखापर्ने दृश्यहरुले सबैको ध्यान तान्ने गर्दछ । त्यसैले यो वार्ताको सफलतापछिको विश्वको अपेक्षा यी २ देशबीचको एकता पनि हो ।
निशस्त्रीकरणमा प्रतिबद्धता छौं : किम
यसैबीच, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सिंगापुरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको शिखर वार्ताको क्रममा कोरियाली प्रायद्वीपलाई पूर्णनिशस्त्रीकरण गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् ।
उत्तर कोरियाली नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको एक सम्झौतामा कोरियाली प्रायःद्वीपमा नै पूर्णनिशस्त्रीकरण गर्ने सहमतिसहित हस्ताक्षर गरेका छन् । २ नेताले सिंगापुरमा भएको वार्तापछि एक संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस वार्तापछि गर्वको अनुभव भएको ट्रम्पले बताएका छन् ।
ह्वाइट हाउसमा फेरि भेट्छौं : ट्रम्प
यसै वार्ताबाट प्रभावित भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेतालाई फेरि भेट्ने वचन दिएका छन् । सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नेता किमलाई ह्वाइट हाउसमा भेट्ने वचन दिए ।
ट्रम्पले सम्झौता हस्ताक्षर समारोह समापनपछि ‘हामी फेरि भेट्छौं, सम्भवत हामी ह्वाइट हाउसमै भेट्छौं’ भने । २ नेताबीच भएको पहिलो भेटघाटबाट अत्यन्त प्रसन्न भएका ट्रम्प उत्तर कोरियाली नेतासँग बारम्बार भेट गर्ने पनि बताए । एकराज पाठक, मोहिनी मिश्र रिसाल/रासस
दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति परे घन्टौंको ट्रेन जाममा
जापानको निर्यातमा निरन्तर गिरावट, झस्किए विश्लेषक
नेदरल्यान्ड्सको उत्राखमा गोलीकाण्ड मच्चाउने आरोपित पक्राउ